Sarri oo filaya in Usbuucan laga Ceyrin doono Chelsea…(Taageerayaasha oo durba bilaabay inay Baraha Bulshada ku faafiyaan Sawirka macalinkii badeli lahaa) – Gool FM
Byare February 20, 2019
(England) 20 Feb 2019. Tababaraha cadaadiska badan saaran yahay ee Maurizio Sarri ayaa filanaya in usbuucan laga ceyrin doono xilka Chelsea haddii uu guul darro kale oo fool xun kala kulmo Manchester City kualanka Finalka Carabao Cup.
Macalinka reer Talyaani ayaa qarka saarnaa tan iyo guul daradii 6-0 Premier League ay kala kulmeen wiilasha Pep Guardiola toban maalmood ka hor.
Sarri ayaa misane lumiyay qeyb kaloo wayn oo ka mid ah Qolka dhar-badelashada, Maamulka sare iyo xitaa taageerayaasha kaddib markii ay Man United ka reebtay FA Cup kuna martay 2-0 xilli ay ku ciyaarayeen Stamford Bridge.
Maamulka sare ee Blues ayaa talaabo qaadi doona haddii uu Sarri guul darrooyin kale kala soo hoydo labada kulan ee Manchester City Final ka Carabao Cup iyo kulanka Premier League ee Tottenham.
Ciyaartoyda Chelsea ayaa xitaa aaminsan in la ceyrin doono Sarri haddii uu guul darro kala soo hoydo kulanka Spurs.
Qaar ka mid ah maamulka kooxda reer London ayaa doonaya inay xilka u dhiibaan Zidane oo saddex jeer oo xiriir a Champions League u gacna galiyay Real Madrid inkastoo ay wajihi doonaan dagaal ah sidii ay ugu qancin lahaayeen inuu qabto mashruucan wayn.
Sawir gacan sameys ah oo uu Zidane kor u hayo maaliyada Chelsea sida isagoo ku soo biiray Stamford Bridge ayay Taageerayaasha kooxda ku faafiyeen Baraha Bulshada.